Waxaan u rajaynaynaa dhammaan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waa maxay macnaheedu inuu noqdo qof raaca Ciise? Waa maxay macnaha in lala wadaago nolosha madax furashada ah ee Ilaah ina siiyay Ciise xagga Ruuxa Quduuska ah? Waxay ka dhigan tahay ku noolaanshaha nolol run ah oo Masiixi ah oo dhab ah iyada oo loo marayo tusaalaheena, u adeegid si iskiis ah u noolaanshaha aadanaha kale. Rasuul Bawlos wuxuu si dheer u sii socday: «miyaadan ogayn in jidhkaagu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah ee idinku dhex jira iyo inaad Ilaah ka hesheen, iyo inaanad ...
Weligaa miyaad maqashay in kuwa dhimanaya iyagoo gaalo ah aan Ilaah loo heli karin? Waa caqiido naxariis iyo waxyeello leh, taas oo caddeyn u ah hal aayad oo masaal ninkaas hodanka ah iyo Laasaros saboolka ah ay tahay inay u adeegaan. Si kastaba ha noqotee, sida dhammaanba tuducyada Kitaabka Quduuska ah, masaalkan wuxuu ku taagan yahay macno gaar ah oo keliya ayaa loo fahmi karaa oo keliya macnaha guud. Had iyo jeer way xun tahay in caqiido la dhigo hal aayad ...
Maahmaah baa tidhaahda: "Rajadu way dhammaataa!" Haddii hadalkaasi run sheego, geeridu waxay noqon doontaa dhammaadka rajo Khudbaddii Bentakostiga, Butros wuxuu sharraxay in dhimashadii Ciise aysan sii hayn karin: "Ilaah baa sara kiciyey (Ciise) wuuna ka xoreeyay xanuunkii dhimashada, maxaa yeelay suurta gal uma ay ahayn in dil lagu qabto" (Falimaha 2,24) ,). Bawlos mar dambe ayuu sharraxay in, sida ku cad sumadda baabtiiska, Masiixiyiintu ma ...
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrad sax ah iyo khalad, qof walbana wuxuu horay u sameeyay wax khalad ah - xitaa iyadoo loo eegayo fikradooda. Hadal caan ah ayaa yidhi: Qof kastaa weligii wuu ka xumaaday saaxiib, ballan buu jabay, wuxuu dhaawacay dareenka qof kale. Qof walba wuu ogyahay dambiga. Sidaa darteed dadku ma rabaan inay wax ku yeeshaan Ilaah. Iyagu ma doonayaan maalinta xukunka sababta oo ah waxay og yihiin in aan daahir ahayn ...
Haddii aad dooran lahayd oo keliya hal marin oo soo koobaya noloshaada masiixiga oo dhan, midkee ayaa noqon lahayd? Malaha aayaddan aadka loo soo xigtay: "Ilaah intuu dunida jeclaaday, wuxuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah?" (Yooxanaa 3:16). Doorasho wanaagsan! Aniga ahaan, aayadda soo socota waa waxa ugu muhiimsan ee Kitaabka Quduuska ah ay tahay inuu fahmo gebi ahaanba: "Maalintaas waxaad ...
Rooma 10,1: 15: Akhbaarta wanaagsan ee qof walba
Bawlos wuxuu warqadda ku qoray Roomayaasha: “Walaalayaalow, waxaan jeclahay reer binu Israa'iil oo aan Ilaah weydiisto iyaga inay badbaadiyaan” (Rooma 10,1 NGÜ). Laakiin waxaa jirtay dhibaato: “Sababtoo ah uma ay qadarina Ilaah hortiisa; Taas ayaan ku caddeyn karaa. Waxa ay u baahan yihiin waa aqoonta saxda ah. Iyagu ma ayan aqoonsan waxa xaqnimada Eebbe ku saabsan yahay waxayna isku dayayaan inay Ilaah hortiisa kaga badbaadaan xaqnimadooda gaarka ah ...
Inkasta oo cafiska cajiibka ah ee Eebbe u leeyahay mid ka mid ah maaddooyinka aan jeclahay, haddana waa inaan qiraa inay ku adag tahay xitaa inaan garto sida dhabta ah. Bilowgii, Ilaah wuxuu u qorsheeyay hadiyad ahaan deeqsinimo leh, ficil qaali ah oo cafis iyo dib-u-heshiisiin lagu sameeyay wiilkiisa, oo udub dhexaadka u ahaa dhimashadiisa iskutallaabta. Natiijo ahaan, ma nihin oo keliya in nala sii daayay, ayaa nalagu soo celiyey - "ayaa laynoogu soo galinayaa" jacaylkeena ...
Ma ogtahay in Masiixiyiin badan ay ku nool yihiin maalin kasta oo aysan hubin in Ilaah weli jecel yahay iyaga? Waxay ka walaacsan yihiin in Ilaah iyaga diidi karo, oo waxaa kasii daran inuu isagu iyaga diiday. Waxaa laga yaabaa inaad tahay isla cabsidaada. Maxaad ugu malaynaysaa inay Masiixiyiintu walaac qabaan? Jawaabtu waa si fudud inay iyagu naftooda daacad u yihiin. Waxay ogyihiin inay yihiin dambiilayaal. Way ka war qabaan guuldaradooda, ...
Dadka qaar ayaa ku doodaya in fiqiga masiixiga uu wax baro bini-aadamka, taasi waa, mala awaalka in qof walbaa badbaadi doono. Sababta oo ah macno malahan inuu fiicanyahay ama xun yahay, toobad keenayo ama ha aqbalo ama ha diido Ciise. Marka cadaabta ma jirto. Waxaan laba dhibaato ku qabaa sheegashadani, taas oo ah mid been abuur ah: Marka hore, aaminaada Saddexanka ma u baahna inaad adigu ...
Aniga waxaan kula hadlayaa su'aal muhiim ah adiga: Sideed u aragtaa kuwa aan rumaysnayn? Waxaan u maleynayaa inay tahay su'aal ay tahay inaan dhamaanteen ka fikirno! Chuck Colson, oo ah aasaasaha barnaamijka 'Prison Fellowship' iyo Barnaamijka Raadiyaha ee Breakpoint ee Mareykanka, ayaa mar su'aashan uga jawaabaya maahmaah: Haddii nin indha la 'cagtaada ku soo jiito ama ku shub kafee kulul shaatigaaga, miyaad u cadhoon doontaa? Wuxuu ku jawaabayaa malaha inaynaan ahayn, kaliya ...
Aad bay iigu adag tahay inaan qirto in lay qabatimay. Been baan u sheegay been ah naftayda iyo hareerahayda inta noloshayda oo dhan. Sidan, waxaan la kulmay dad badan oo qabatimay kuwaas oo ku tiirsan waxyaabo kaladuwan sida khamriga, kookaha, heroin, marijuana, tobaakada, Facebook iyo dawooyin kale oo fara badan. Nasiib wanaagse, maalin maalmaha ka mid ayaan wajihi karay runta. Waan qabatimay Waxaan u baahanahay caawimaad! Natiijooyinka balwadu waxay ku jirtaa dhammaan ...
Waxaan weydiiyaa dhowr su'aalood dhammaanteena carruurta leh. "Ilmahaagu weligii caasiyo ma kaa ahaa?" Haddii aad ku jawaabtay haa, sida waalidiinta kale oo dhan, waxaan u nimid su'aasha labaad: "Weligaa canuggaaga ma u ciqaabtay caasinimo?" Muddo intee la'eg ciqaabtu way jirtay? Si aad si cad uga dhigto: "Ilmahaaga ma u sharaxday in ciqaabtu aan dhammaad lahayn?" Taasi waxay umuuqataa waalli, miyaanay ahayn? Annaga oo ah dadka tabarta daran iyo ...